Kooxda Arsenal oo durba xiriir la sameysay badelka Unai Emery – Gool FM
Kooxda Arsenal oo durba xiriir la sameysay badelka Unai Emery
Dajiye November 29, 2019
(London) 29 Nof 2019. Kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay durba xiriir la sameysay badelka macalinkeedii hore ee Unai Emery, si ay ula saxiixato.
Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa wada hadalo la furatay macalinka reer Talyaani ee Massimiliano Allegri, si ay ula saxiixato xilliyada soo socda.
Wargeyska “Metro” ee dalka England ayaa shaaca ka qaaday macalinka reer Talyaani ee Massimiliano Allegri uu noqon doono macalinka cusub ee Arsenal maalmaha soo socda, kaddib markii shaqada laga ceyriyay Unai Emery, sababa la xiriira natiija xumi kooxda soo wajahday.
Saraakiisha Arsenal ayaa waxay go’aansadeen inay shaqada ka ceyriyaan macalinka reer Spain ee Unai Emery, kaddib guuldarradii 1-2 aheyd ee xalay ka soo gaartay kooxda Eintracht Frankfurt, kulankoodii shanaad wareega group-yada ee tartanka Europa League, taasoo ka dhigtay inuusan wax guul ah la gaarin Gunners 7 kulan dhamaan tartamada kala duwan ee xilli ciyaareedkan.
Kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ayaa sameysay natiijooyinkii ugu xumaa, marka loo eego tan iyo bishii Febraayo ee 1992-kii, iyadoo bayaan ka soo baxay maanta oo Jimco ah maamulka Arsenal lagu xaqiijiyay inay shaqada kaga ceyriyeen Unai Emery sababa la xiriira natiija xumi soo wajahday kooxda iyo in waxqabadkooda uusan noqonin sidii la rabay.
Haddaba shabakada caalamiga ah ee “Sky Sports” ayaa sheegtay in Gunners ay la xiriirtay Massimiliano Allegri, wuxuuna macalinkii hore ee kooxda Juventus muujiyay inuu diyaar u yahay inuu noqdo badelka Unai Emery hadii shuruudaha la isku afgarto.
52 jirkan reer Talyaani ayaan wax shaqo ah qabanin tan iyo markii uu ka tagay kooxda Juventus dhamaadka xilli ciyaareedkii hore, wuxuuna haatan ku noolyahay magaalada London, isagoo ku gudi jira barashada luqada Ingiriiska, si uu uga shaqo bilaabo horyaalka Premier League.
RASMI: Arsenal oo ku dhawaaqday inay shaqada ka ceyrisay Unai Emery
Muxuu ka yiri Zidane kulanka adag ee dhex mari doono kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid?